KỌLỌSI 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (KỌL 3)
Nꞌihi na unu anwụọla. E zokwara ndụ unu nꞌime Chineke site na Kraịst.
Mgbe Kraịst, onye ahụ ji ndụ unu nꞌaka ya ga-alọghachi, unu ga-enwukwa dị ka ya, soro ya keta oke nꞌebube ya.
Wezuganụ mmehie na ihe ụwa nile na-arụ arụ nꞌime unu. Meenụ ka ọchịchọ ọjọọ nile dị nꞌime unu bụrụ ihe nwụrụ anwụ. Unu etinyekwala aka nꞌịkwa iko, adịghị ọcha, ọchịchọ ọjọọ, agụụ ime ihe ọjọọ, na anya ukwu (nꞌihi na anya ukwu bụkwa ikpere arụsị).
Iwe ọkụ Chineke ga-adakwasị ndị nile na-eme ihe dị otu a.
Ihe ndị a bụ ihe unu onwe unu na-eme nꞌoge gara aga mgbe unu na ndị ụwa bụ otu.
Unu agwala ibe unu okwu ụgha, nꞌihi na unu eyipụla mmadụ ochie ahụ na-eme ụdị omume a.
Ugbu a unu eyikwasịla ndụ ọhụrụ ahụ, nke bụ mmadụ ọhụrụ ahụ Chineke onye kere ya na-eme ka ọ na-adị ọhụrụ mgbe nile, na nke na-agbalị ịdị ka Kraịst.
Nkewa ọ bụla adịghị nꞌime ndụ a. Ọ dịghị mkpa ebe onye ọ bụla si pụta, ma ọ bụ onye Juu ma ọ bụ onye mba ọzọ, ma ọ bụ onye e biri ugwu, ma ọ bụ onye a na-ebighị ugwu. Ọ dịkwaghị mkpa ma ọ bụ onye na-asụ asụsụ ọzọ, ma ọ bụ onye ime ọhịa, ma ọ bụ ohu, ma ọ bụkwanụ onye nwe onwe ya. Ihe dị mkpa bụ ma Kraịst o bikwa nꞌime onye ahụ, nꞌihi na Kraịst dịrị mmadụ nile.
Unu bụ ụmụ nwanyị nwere dị, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu nꞌihi na nke a bụ ihe unu kwesịrị ime dị ka ndị Kraịst.
Unu bụ ụmụntakịrị, na-emenụ ihe na-atọ Chineke ụtọ site nꞌirubere nne na nna unu isi. Nke a bụ ihe unu kwesịrị ime dị ka ndị Kraịst.
Chetanụ nke ọma na unu nwere ụgwọ ọrụ nke Chineke kwadobere inye unu, ndị ya. Nꞌihi na ọ bụ Kraịst ka unu na-ejere ozi.
Onye ọ bụla na-eme ihe ọjọọ ga-anata ụgwọ ọrụ nꞌihi ihe ọjọọ nile o mere. Nꞌihi na Chineke anaghị ele mmadụ anya nꞌihu mgbe ọ na-ekpe ikpe ya.
KỌLỌSI 1 / KỌL 1
KỌLỌSI 2 / KỌL 2
KỌLỌSI 3 / KỌL 3
KỌLỌSI 4 / KỌL 4